A na - ese foto nke Huawei Mate 10 | Gam akporosis
Na October 16, Huawei ga-eweta Huawei Nwunye 10, ọkọlọtọ ọhụrụ nke ezinụlọ phablet nke onye nrụpụta Eshia nke rutere ihu ndị dị arọ dị ka Galaxy Note 8, LG V30 ma ọ bụ iPhone X.
Ekwentị nke na-abịa na nke ọhụụ ọhụrụ ma e jiri ya tụnyere onye bu ya ụzọ, dị ka onyonyo nke Huawei Mate 10 nke edecharala ugbu a na egosiputa ngwaọrụ ya. ntakiri n'ihu osisi. Frameless ejiji abiala Huawei.
Nsụgharị ndị a na-egosi atụmatụ nke Huawei Mate 10
Asịrị na-atụ aro na Huawei Mate 10 ga-abata n'ụdị dị iche iche: Nwunye 10, Nwunye 10 Pro na Mate 10 Lite. Ntughari ohuru a di ka nke ndi na-esote nke Huawei Mate phablets nke ozo, ebe anyi nwere ike ihu onu ogugu na nnukwu ihuenyo, nke aturu anya ya bu sentimita isii, ya na obere osisi.
Na-akpali mmasị, n'agbanyeghị na-ebelata n'ọnụ, emeputa kpebiri na-na akara mkpisiaka na ihu. N'okwu a ha gaara etinye ya na azụ iji mee ka Huawei Mate 10 dị obere, mana echere m na a ga-edebe nhọrọ a maka ụdị vitaminized ọzọ.
Na elu oke ihuenyo anyị nwere ike ịhụ ihe mmetụta abụọ nke ya na Huawei Mate 10. Anyị amaghị ma ọ ga-abụ sistemụ igwefoto abụọ ma ọ bụ usoro ụfọdụ nke ihu ihu, anyị ga-ahụ otu onye nrụpụta si ju anyị anya.
Ihe anyị tụrụ anya ya, ọ bụrụkwa na ọ bụ, na di na nwunye 10 nwere sistemụ igwefoto abụọ nke Leica bịanyere aka na ya, ihe a na-ahụkarị na ekwentị Huawei dị elu.
Maka ugbu a, asịrị na-egosi na Huawei Mate 10 ga-arịgo ihe nhazi Hi Silicon Kirin 970, ọla nke ndị na-emepụta ihe dị iche iche nke ndị Asia, yana 4 ma ọ bụ 6 GB nke RAM dabere na ụdị ahụ, na mgbakwunye na batrị 4.000 mAh.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » A na-edozi ihe oyiyi nke Huawei Mate 10
Achọrọ m ya, achọrọ m ya, achọrọ m ya, achọrọ m ya, achọrọ m ya ...
Zaghachi Pacho Pérez Suárez
Zaghachi Felipe Jiménez Díaz Granados
OUKITEL K10000 MAX na-ebibi ndị asọmpi ya